Xiisadii Soomalida Dhuunyar & Canfarta U dhaxay oo meela fog cagaha la gashay. – Xeernews24
Xiisadii Soomalida Dhuunyar & Canfarta U dhaxay oo meela fog cagaha la gashay.
Shacabka Soomaaliyeed ee sidda qasabka ah loogu wareejiyay dhulkoodii Gobolka Canfarta ayaa kacdoon balaadhan oo ay ku diidan yihiin kamid noqoshada deegaanka Canfarta waday intii mudo ah.
Wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Garba-ciise ay kulamo iyo shirar is daba joog ah oo ay kaga arinsanayaan mustaqbalkooda aayahooga baryahan uga socday magaaladaas.
Siddoo kale Soomaalida ayaa dhanka xukuumada Abiy codsi u diray iyaga oo cabashadood aan hada kahor wax ka hoos qaaday uusan jirin dheg jalac loo siin.
Dhanka kale waxaa jira wafti ka socday Addis Ababa uu gaadhay wadanka Jabuuti. Waftigan oo ay hogaaminayso Wasiirada Difaaca Itoobiya Caasha Maxamad oo ka soo jeedda qowmiyadda Canfarta ayaa la kulaantay Madaxwaynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Warkan ayaa intaas ku daraya in socdaalka waftigan uu salka ku hayo cabasho uu Maamulka Canfartu u gudbiyay xukuumada Abiy oo ku saabsan in dawlada Jabuuti ay farogalin toos ah ku hayso xiisadan murugsan ee u dhaxaysa Soomaalida iyo canfarta faralinta oo ay waxba ka jirin marka laga duulo xidhiidh u dhaxeeya dawladda jabuuti iyo dadka deganka xasaaraddu ka taagan tahay.
Geesta kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegi in dagaalkii dhex maray Liyuu Booliska is Maamulka canfarta iyo dadka deganka ee Soomaaliyeed lagu laayey aska reer jabuuti ah oo ka tirsan qowmiyadda canfarta Jabuuti arrintaas oo hadday dhab noqota abuuri karta jahawareer cusub oo siyaasadeed.
Xogga diblomaasiyeed ayaa laga soo xigtay in xiisadan galbeedka gobolka Sitti ay dawladda u aragto fursad ay Dr Abye uga faaidaysato kuna cadaadinayso siddi ugu dhega nuglaan lahaa rabinta jabuuti ee ah in uu Dr,ugu yaraan hakiyo is badalka geeska Afrika oo dawladda Jabuuti is aragto in meel cidla ah lagu xidhay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/Caasha.jpg 418 506 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-13 13:50:282019-01-13 13:50:50Xiisadii Soomalida Dhuunyar & Canfarta U dhaxay oo meela fog cagaha la gashay.
Is Maamulkii Canfarta oo Maamulkii Soomaali-State kaga Horeeyey Probagaantaha... Enjineer Mahad Abiib oo mar kale loo diiday in loo soo cesho warqadihiisi dhalasha...